ဗုံးသီးဟု ယူဆရသော အရာအား ဆော့ကစားရာမှ ပေါက်ကွဲ၍ သတ္တမတန်းကျောင်းသား တစ်ဦးနှင့် အစ်မဖြစ်သူ?? - Yangon Media Group
ဗုံးသီးဟု ယူဆရသော အရာအား ဆော့ကစားရာမှ ပေါက်ကွဲ၍ သတ္တမတန်းကျောင်းသား တစ်ဦးနှင့် အစ်မဖြစ်သူ??
မိတ္ထီလာ၊ မတ် ၈
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့နယ် အင်ပင်ဝကျေးရွာတွင် ဗုံးသီးဟု ယူဆရသောအရာအား ဆော့ကစားရာမှ ပေါက်ကွဲ၍ သတ္တမတန်း ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့် အစ်မ ဖြစ်သူတို့ ဗုံးစထိမှန် သေဆုံးခဲ့ ကြောင်း မိတ္ထီလာမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မိတ္ထီလာမြို့ သီးပင်ကုန်းအုပ်စု အင်ပင်ဝကျေးရွာ နေ ဦးစိုးခိုင်၏သားဖြစ်သူ အလက (၅၄) သီးပင်ကုန်းကျောင်းနေ သတ္တမတန်းကျောင်းသား ချစ်သဲစိုး(၁၂)နှစ်သည် မတ် ၈ ရက် နံနက် ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က ၎င်းနေအိမ် ရှေ့၌ လက်ပစ်ဗုံးအဟောင်း အသေးဟု ယူဆရသော (လက်သီးဆုပ်ခန့် – စုံစမ်းသိရ)ပစ္စည်းအား ကတ္တားနှင့် ထုရိုက်ဆော့ကစားစဉ် ဗုံးသီးပေါက်ကွဲ၍အနီးရှိ အစ်မဖြစ်သူ မရီမာခိုင် (၂၁)နှစ်နှင့်အတူ ဗုံးသီးဟု ယူဆရသောပစ္စည်းထိမှန်၍ အခင်း ဖြစ်နေရာ၌ ဒဏ်ရာများရရှိ သေဆုံးခဲ့သဖြင့် မိတ္ထီလာပြည်သူ့ဆေး ရုံသို့ ရန်အောင်မြင် နာရေးကူညီမှု အသင်းပိုင်ယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ခဲ့ သည်။
စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရ မရီမာခိုင်နှင့် ချစ်သဲစိုးတို့သည် မတ် ၇ ရက် ညနေ ၅နာရီခွဲခန့်က အင် ပင်ဝကျေးရွာတောင်ဘက် ငါးမိုင်အကွာသို့ ဆိတ်ကျောင်းသွားရာတွင် ချစ်သဲစိုးမှာ အဆိုပါဗုံးသီးဟုယူဆရသောပစ္စည်းအား ယာကွင်းပြင်အတွင်း တွေ့ရှိ၍ နေ အိမ်သို့ ယူဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရပြီး အခင်းဖြစ်ပွား ရာသို့ နယ်မြေခံတပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး စိုးမင်းထွန်းနှင့်အဖွဲ့၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီး သန်း ဌေးဦး၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး မိုးညွန့်ထွန်းနှင့်အဖွဲ့၊ ရှမ်းမငယ် ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးနှင့် အဖွဲ့တို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြ သည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှမ်း မငယ် နယ်မြေရဲစခန်းမှ သေမှု သေခင်း အမှတ်(၁/၂ဝ၁၉)ဖွင့် လှစ်ထားကြောင်း သိရသည်။
မြိတ်မြို့ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ပေါ်တက်ပြီး မဖွယ်မရာ လုပ်သည့် စိတ်ဝေဒနာရှင် အမျိုးသမီးအား
အပြင် ၃၇ မင်းနတ်တွင် ထင်ရှားသည့် ပခန်းကိုကြီးကျော်နတ်ပွဲ ကူနီနန်းရင်းတွင် စတင်ကျင်းပ